Indlu ka-errebi - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGiambattista
Indlu evaliweyo enegadi ebandakanya indawo enkulu esanda kulungiswa enamagumbi amabini kumgangatho wokuqala. Itholakala kwilali encinci ejikelezwe ziinduli eziluhlaza iikhilomitha ezi-4 ukusuka eGavi (imizuzu emi-5 ngemoto), iikhilomitha ezi-5 ukusuka eVoltaggio, iikhilomitha ezingama-45 ukusuka eGenoa, imizuzu eyi-10/15 ukusuka kwi-Serravalle Designer Outlet, imizuzu eyi-10 ukusuka kwiklabhu yeGolf yaseLa Bollina kunye kufutshane. . of the Capanne Marcarolo Park di kunye nenkangeleko yayo omhle. Ngoko ke ifanelekile kwiintsapho, abathandi bendalo, abantu bezemidlalo kodwa nakwabo bathanda ukuthenga.
Indlu enamagumbi amabini inesango lokungena, igumbi lokulala, igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Iindwendwe zinethuba lokusebenzisa ikhitshi, i-barbecue, isidlo sasemini, ehlotyeni, ngaphandle phantsi kweveranda kwaye uphumule egadini. Sincoma ukutyelela kwi-Fort yaseGavi kunye negalari yezithombe zeCapuchin Friars yaseVoltaggio, isityebi kwimifanekiso yobugcisa beGenoese ukusuka kwi-16 kunye ne-17.
Le ndawo, phakathi Piedmont kunye Liguria, unikeza ithuba lokuba ukonwabela oluhlaza weentaba bethu ithuba lokwenza iinkalo ezintle kunye / okanye strolls, ukonwabela cuisine olugqwesileyo kunye Ligurian / Piedmontese amakhono kodwa udandatheko ngokuthenga ezikufuphi Serravalle Umyili Indawo yokuphuma. Kwiikhilomitha ezi-4 kukho idama lokuqubha langaphandle laseGavi kwaye malunga neekhilomitha ezi-8 kwiklabhu yeGalufa yaseBollina.
Umbuki zindwendwe ngu- Giambattista
Mna nenkosikazi yam siya kukwamkela kwaye siya kuzama ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko kunokwenzeka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carrosio